Ka faa'iideyso bilowga sanadka 2018 si aad u nadiifiso Mac-gaaga Waxaan ka socdaa mac
Ka faa'iideyso bilowga sanadka 2018 si aad u nadiifiso Mac-gaaga
Tani waa wax caadi ahaan ku soo noqnoqda waxaan ka imid Mac waana waana waqti ka waqti waxaan rabnaa inaan ku xasuusinno sida ay muhiim u tahay in loo sameeyo nadiifin yar (ama weyn) Mac-gaaga had iyo jeer si ay si fiican u shaqeyso. Xaaladdan oo kale kama hadleyno wax la yaab leh waana in munaasabado badan iyo gaar ahaan marka aan ku rakibno nooc cusub oo macOS ah, waxaan inta badan kugula talinaynaa in la sameeyo nadiifintaas.
Dabcan kamahadleyno nadiifinta qeybta dibada ee qalabka ama kumbuyuutarka, taasi sidoo kale. Kuwo badan ayaa ah barnaamijyada, barnaamijyada, sawirada, feylasha, dukumiintiyada iyo barnaamijyada kale ee aynaan ku isticmaalin Mac-geena muddo dheer iyo hadda oo sanadku bilaabmayo waa wakhti fiican oo laga takhalusi karo.
Xaqiiqdii, haddii aan sida caadiga ah maalin walba dayactir yar sameyno, uma baahnid inaan nadiifinno saxankeenna ama waqti yar ayaan ku qaadan doonnaa Laakiin tani waa wax yar oo adeegsadayaashu sameeyaan waana sababta ay ugu fiican tahay in lala qabsado ama la doorto taariikhda sanadka si loo nadiifiyo qalabka. Inbadan waxay dhahaan waxay sugaan markay cusbooneysiinayaan macOS, laakiin daqiiqadahaas waxa jira rabitaan ah in la fuliyo rakibaadda iyo in yar oo la nadiifiyo ee kaalay, shaqo tag.
1 Samee Kayd
2 Abaabulaan fayl iyo dukumiinti
3 Gargaarka Koowaad
Midda ugu horreysa oo dhan waa in la sameeyo keyd haddii aan tirtirno wax aanan dooneyn inaan tirtirno. Tani waa tallaabo aanan ka maarmi karin marka aan nadiifineyno Mac-da, haddii aan ku heli karno keyd disk ah bannaanka ka dibna aan badbaadin karno inuu ka go'o kumbuyuutarka, ayaa ka sii fiican.
Waxaa lagugula talinayaa inaad haysato dhowr nuqul oo gurmad ah oo ah wax kasta oo muhiim u ah Mac-ga iyo had iyo jeer waxa aan kugula talinayno keyd ugu hayso Mashiinkayaga Waqtiga. Waxaan isticmaali karnaa aalado kale laakiin midka noogu fiican Apple ayaa iska leh.
Abaabulaan fayl iyo dukumiinti
Abaabulida faylalka sawirka ama naftaada ku madadaaliso inaad u kala soocdo PDF-yada, dukumiintiyada iyo wixii la mid ah magacaa waa wax aad u xiiso badan sidoo kale. Si tan loo sameeyo, waxaa ugu wanaagsan in la xusho dhammaan dukumiintiyada aan dooneyno inaan dalbanno oo aan magacooda u beddelno si loogu diyaariyo xarfo ahaan. Tan waxaa sidoo kale lagu samayn karaa sawirro, dukumiinti qoraal ah ama wax kasta oo aan ku dari karno isla galka.
Marka nadiifintu dhammaato waxaa wanaagsan in la wado Caawinta Koowaad. Kuwa aan aqoon "Gargaarka Koowaad" waa wax la mid ah Dayactirka Ogolaanshaha Disk in aan horey u sameynay. Apple wax ayey ka beddeshay in yar ka hor in kasta oo ay run tahay in aad sidoo kale samayn karto wax la mid ah dayactirka rukhsadaha, waxaa ugu wanaagsan in si toos ah loo adeegsado xulashadan aan helno Adeegga Disk. Waxaan soo galeynaa Disk Utility, oo waxaan gujineynaa diskiga aan dooneyno inaan falanqeyno. Habkani wuxuu hubin doonaa diskka khaladaadka. Soo socda, hagaajin doonaa diskka haddii loo baahdo waxaadna diyaar u tahay inaad hesho nooca cusub qalad la'aan.
Caqli ahaan maahan waxa kaliya ee aan ku sameyn karno nadiifinta noocan oo kale ah, laakiin inaan ku bilowno sanadka qalabka diyaar u ah horeyba waa wax. Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa adeegsada softiweer ama codsi si aad u nadiifiso Mac-gaaga, kaamil ahaanta, laakiin xusuusnow in aan wax walba laga saarin iyaga oo ay wanaagsan tahay in la sameeyo wax-ka-beddelka gacanta yar. Caqli ahaan waxaas oo dhami looma baahna haddii aanu qofku rabin inuu sameeyo, waanu samayn karnaa iyada oo nadiifinadan la aan iyo in Mackeennu uu u sii shaqaynayo si dhammaystiran, laakiin waa wax runtii inagu weyn inagu habboon in aannu is abaabulno oo maahmaahdii Isbaanishku waxay tidhi : "Sanadkii hal mar wax ma yeelo"
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Ka faa'iideyso bilowga sanadka 2018 si aad u nadiifiso Mac-gaaga
MAANTA waxaan bilaabayaa inaan sameeyo nadiifintaas iyo amarkaas. Laakiin waxbaa igu dhaca: Disk Utility marwalba waa la calaamadsadaa oo Imac-kaygu wuu fadhiistaa. Maxaan sameeyaa Waad ku mahadsantahay caawimada aad isiin karto.
Telegram waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 3.7.2 oo leh duluc mugdi ah iyo horumarin kale
Apple waxay ka bilowday Australia iyo New Zealand barnaamijka "Ku noqoshada Univesity"